I-Cleanroom Swab Solutions Factory-China Cleanroom Swab Solutions Solutions Abavelisi, ababoneleli
I-swab yegumbi lokucoca lika-J.able yenziwe kusetyenziswa izixhobo ezikrwada zodidi oluphezulu kunye noomatshini abaphucukileyo phantsi kolawulo lweengcali zethu. Ngaphezu koko, i-swab yethu ebonelelwayo ikwajongwa kwiinkqubo ezahlukeneyo phantsi kolawulo olungqongqo lwabalawuli bethu bomgangatho ukuqinisekisa ukuqina kwayo phambi kokuthunyelwa. I-swab ebonelelweyo isetyenziselwa ukucoca izicelo. Ngaphandle koko, iJ.able Cleanroom Swab ibonelelwa ngobukhulu obuninzi kwaye igqibezela ngamaxabiso alungeleyo epokothweni.
• Ubungqina bokukrazuka
• Ukugqiba okugudileyo
• Amandla aphezulu
I-Swab ye-Cleanroom yenziwe ngezinto ze-ultraclean kunye ne-hot bonding ecocekileyo kunye nobuchwepheshe obuncinci be-centrifugal. Ibonisa amandla alungileyo okutywinwa komphetho, akukho kukhutshwa kwamasuntswana kunye nokukhutshwa kwentsalela xa ucoca iindawo zakho ezibuthathaka kunye nomphezulu. Yonke i-swab yethu yokucoceka esetyenziswa ngokukhohlakeleyo kwi-HDD, i-optical, i-semiconductor, i-pharmaceutics yokususa umkhondo wobungcoliseko emnweni awukwazi ukufikelela kwindawo.
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJPS-707
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJFS-920
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJFS-710
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJFS-708
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJFS-707W
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJFS-L70723
Uthuli olukhululekile kunye ne-antistatic swab yokucoca YJPS-713
Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Buccal Swab Collection Kit, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml,